(Bash): Umyalo wokukhiqiza inombolo engahleliwe | Kusuka kuLinux
Kwesinye isikhathi, sihlela iskripthi esithile ku- Bash …. futhi sidinga (ngasizathu simbe) ukukhiqiza inombolo ethile engahleliwe.
Ngalokho ungalungiselela uhlelo lonke (noma usebenze ...) yebo, kepha ... ngokumangazayo uhlelo lwethu selukwenzile lokho 😀
Ku-terminal, thayipha okulandelayo bese ucindezela [Faka]:
kunanela $ RANDOM
... kuzovela inombolo, baphinde benze into efanayo bese kuvela enye inombolo, njalonjalo 🙂
Lokho ekwenzayo ukukukhombisa inombolo engahleliwe (noma yikuphi) phakathi kuka-0 no-32768 (inani eliphelele, okungukuthi, ngaphandle kwekhefana).
Uma uyidinga ukuthi ibe yinombolo engahleliwe, kepha phakathi kuka-0 no-ake sithi 100, ungabeka lowo mkhawulo kuyo 😀
i-echo $ (($ RANDOM% 100))
Okufanayo, esinye isibonelo ... uma ufuna ukuthi kube inombolo ephakathi kuka-0 no-29 kungaba:
i-echo $ (($ RANDOM% 29))
Ngabe akuqondakali? 😀
Uma bezoyisebenzisa kumbhalo we-bash abawenzayo, ukwabela inani elakhiwe (inombolo engahleliwe) kokuguquguqukayo kungaba:
Futhi konke lokhu kuphela, angazi ngawe ... kepha ngiyazi ukuthi kuzoba wusizo kimi kwesinye isikhathi hahaha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » (Bash): Umyalo wokukhiqiza inombolo engahleliwe
Yebo, bengikade ngiyivivinya futhi ibuyisa kuphela inombolo enamadijithi ama-4, ngingayenza ibe nkulu kanjani?
Ithiphu ethakazelisa kakhulu, ngiyabonga.
Ibuyisa inombolo phakathi kuka-0 no-32768, angikwazi ukuthola izinombolo ezinkulu.
futhi ingakhiqiza ama-exadecimals ????
Lokho kuyasebenza kepha akulungile, ngesizathu esilula sokuthi i-RANDOM iyehluka futhi ungakwenza:
okuguqukayo = $ RANDOM
futhi yilokho kuphela! ungasebenzisi i-echo ku-aprte yesiginali (okuyilokho okwenzayo)
Yebo, kusobala ukuthi ingafinyelelwa kanjena ... umehluko kuphela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, ukubona inombolo okuthathwe ukuguquguquka (ngoba umsebenzisi akayena umqageli), kungadingeka ukwenza i-echo .... futhi ekugcineni, engikwenzayo lapha ukumane wenze i-echo (ukuze umsebenzisi abone ukuthi iyiphi inombolo ethathiwe) kwasekuqaleni.
Ingabe ngenza ukuba ngiqondwe? 🙂
I-Wuilmer bolivar kusho
Enye indlela yokwenza inombolo engahleliwe, yize kulokhu kungaba yilo myalo:
usuku "+% N" | sika -c 9
Lokho kungasinika usuku kuma-nanoseconds anezinombolo eziyi-9. Uma sifuna idijithi eyodwa, khona-ke ubeka u- "cut -c 9" (idijithi yokugcina ihlale ingahleliwe ngoba yinombolo encane kunazo zonke). Uma sifuna izinombolo ezi-2 bese sibeka u- "cut - c 8,9". Uma sifuna izibalo ezintathu bese "cut -c 7-9" (siqala ukusebenzisa ikhonco).
Okuwukuphela kwento embi ngalokhu ukuthi uma sifuna ukuthola izinombolo eziningi ezingahleliwe zilandelana ngesikhathi esifushane, ngoba le yinombolo engahleliwe ngokususelwa kudethi nesikhathi sayo. Lokho wukuthi, uma senza i- for ngalo myalo singabona ukuthi:
$ for i ku `seq 1 1 500`; idethi "+% N"; kwenziwe
Ngicabanga ukuthi kucacile angithi? Izibalo ezingakwesobunxele ziyefana kakhulu ngesikhathi esifushane, kunjalo, futhi lezo ezingakwesokudla "zingahleliwe".
Phendula ku-Wuilmer Bolivar
iso elimnyama kusho
mmm…. Ngiwuthandile, ngineskripthi esincane, sipendiwe ukukhiqiza izinombolo ezingahleliwe, ngiyabonga.
Phendula esweni elimnyama
Kuyakhonza .. nokuningi ..
ikakhulukazi uma uhlela isikhombimsebenzisi ku-bash nephasiwedi, ukuphepha, njll, njll, njll haha.
I-aprote enhle kakhulu.
UJosé Antonio Ulandele iBent kusho
Okokuqala, ngihalalisela ngale webhusayithi enhle kakhulu, engikade ngiyilandela isikhathi eside.
Futhi okwesibili, bhala okuncane kulokhu okufakiwe:
Lapho ukukhawulelwa kwenziwa kanjena:
i-echo $ (($ RANDOM% 10))
Empeleni, oku-oda utolika ukuthi inombolo yakho ekhiqizwayo i-modulus% (okusele kokuhlukaniswa) kwenombolo elandelayo, kulesi sibonelo, 10.
Noma iyiphi inombolo ehlukaniswe ngo-10 ayisoze yanikela njengensalela okuthile okukhulu kunokwahlukanisi uqobo.
Inkinga ukuthi nayo ngeke inikeze inombolo efanayo, ngoba ukwahlukaniswa ngo-0 akunangqondo kutolika.
Lokhu kusho ukuthi i-echo $ (($ RANDOM% 10) izonikeza imiphumela phakathi kuka-0 no-9, kepha hhayi i-10.
Isixazululo sale ngxabano ukufaka eyodwa kumkhawulo wakho, ukuze inombolo efanayo iwele ebangeni elingahleliwe.
i-echo $ (($ RANDOM% 11))
Lokhu kuzonikeza imiphumela phakathi kuka-0 no-10.
Phendula uJosé Antonio Ulandele Okugoqiwe
iptables, ukulinganisa ecaleni langempela